Waa tan sababta loo adeegsado VPN on Mac OS - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO • kale • Featured • TECH & TELECOM Maxaad VPN ugu isticmaashaa OS OS
Waa sababta Sababta loo adeegsado VPN on Mac OS
TELES RELAY 29 June 2019
Macintosh waa nidaamka hawlgalka (Mac) oo ay soo saartay shirkadda Apple Inc. ee 1984. Maaddaama tirada dadka isticmaalaya OS OS ay kordhayaan, nuglaanta iyo dhowr nuglaanta amniga ee lagu muujiyey nidaamkan hawlgalka waxay dhaawici karaan xogta adeegsadaha haddii aan la qaadin tallaabooyinka amniga ku habboon.
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah falalka khaaska ah ee loogu talagalay Mac OS inay xadaan macluumaadka isticmaale-xasaasiga ah:
Bogagga internetka ee cookieMiner ayaa la helay dhammaadkii Janaayo 2019. Waxay xattaa sirta iyo aqoonsiga isticmaale. Waxay kaloo heli kartaa iTunes ay kujirto farriimo qoraal ah si ay u aruuriso macluumaadka looga baahan yahay in looga gudbo xaqiijinta laba-arrimood, marin u hel boorsada dhibbanaha, oo ay xatooto adeegsiga cryptocurrency.
Bishii Maay 2018, barnaamijka qaylo-dhaanta ee loo yaqaan 'Cryptominer mshelper application' wuxuu bartilmaameedsaday mac OS. Isticmaalayaasha cudurka waxay ogaadeen in taageerayaashooda ay sifiican ushaqeeyaan isla markaana meelahoodu ay aad uga darnaayeen sidii caadiga aheyd, taasoo muujineysa in nidaamka asalkiisu yahay kheyraadka. Waxaad filan kartaa in macdan qodayaasha cryptocurrency inay noqdaan kuwa aad iyo aad uga khatar badan mustaqbalka.
Bishii Febraayo 2018, adeegsadayaasha Mac waxaa looga digayaa noocyo kaladuwan oo ah Mac-faneedyada iyadoo loo marayo qalab rakibayaal Adobe Flash Player ah. Inta lagu gudajiro rakibida, nuqul ka mid ah Qalabka Macruufka Advanced ayaa la rakibay taas oo muujineysa inay la kulantay dhibaatooyin la xiriira nidaamkaaga. Xitaa ka dib markii ay meesha ka saareen Advanced Mac nadiifiye iyo qaybaha kala duwan ee Crossrider, waxaa la ogaaday in hargabkan noocan ahi uu wali ku jiro nidaamka.
Si looga hortago in nidaamkaagu uu weeraro dhammaan noocyada boggaga internetka, waa inaad ku rakibtaa waxa ugu fiican VPN loogu talagalay Mac, kaas oo kuu oggolaanaya inaad si gaar ah ula xiriirto shabakad dadweyne, oo aan la ilaalin oo aan cidna laga warqabin. Inta badan aaladaha VPN waxay leeyihiin noocyo sir ah oo gaar ah si ay u xafidaan xogtaada.
ammaanka: VPN waxay kadhigtaa dhamaan kalfadhiga websaydhka. Tani waxay ka dhigeysaa degel kasta mid aamin ah sida bangiga ama maaliyad kale.
Xaraashka xawaaraha: VPN ayaa qasbaya dhammaan taraafikada ku jira server ka hor intaadan adiga kuu dirin. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho marin dheeraad ah oo xogtaada ah.
helitaanka: Waxa jira xayiraad badan oo dhinaca internetka ah oo ay ku soo rogeen shirkado kala duwan oo khuseeya goobta iyo waqtiga howlahooda. Intaa waxaa u dheer, dawlado badan oo dulman ayaa xaddidaya macluumaadka u horseedi kara "fikir bilaash ah". VPN waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay helaan adeegyo aan habeysan oo aamin ah waxkasta oo ku jira internetka.
sir: Shabakad khaas ah oo khaas ah ayaa xiraysaa cinwaanada isticmaaleyaasha waxayna ka ilaalisaa aqoonsigooda inay la socdaan
Marka laga soo tago taas, PureVPN waxay siisaa shaqo buuxda adeegsiga Mac, taas oo kordhinaysa amniga digital ilaa heer sare. Tusaale ahaan; PureVPN ee barnaamijka softiweerka Mac wuxuu la yimaadaa server-xawaare sare ku kaca oo bixiya khibrad qulqulka qulqulka ah iyo xawaaraha aad u xawaare badan. Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah kahortaga daadinta dillaaca DNS. Nuglaantaan waxay u oggolaaneysaa Adeeg Bixiyaha Internetka, iyo sidoo kale wixii kale ee wadada ku yaal, inay arkaan websaydha isticmaale uu booqan karo. Tani waa suurtagal sababtoo ah weydiimaha DNS ee biraawsarka biraha waxaa si toos ah loogu diraa server-ka ISP ee ISP. PureVPN waxay ilaalisaa adeeg bixiyahaaga internetka waxayna ka hortagtaa wax kastoo muujinaya cinwaankaaga IP-ga waxayna dhaawici karaan nidaamkaaga. PureVPN wuxuu u shaqeeyaa sidii gaashaam adiga iyo dadka saddexaad ah, kaas oo lagu soo gudbiyo dhammaan taraafikada soo gala iyo kuwa soo gala ee loo sii maro server-ka PureVPN. Waxaad helaysaa taraafikada la sifeeyay oo kuu oggolaaneysa inaad si ammaan ah ugu adeegso internetka.
Cyberpunk 2077 waxay ku hayn doontaa 80 GB wadadaada adag
Estanciense oo ah dhibbanaha baadha ka dib markii la daawaday video porn video on - xnxx
Hindiya: Ruushka iyo Ruushka ayaa isku dayaya in ay ka tallaabaan cunaqabteynta Mareykanka ee khatarta hubka hubka ah India News
Maalinta Hore: 17% off on Nintendo 2DS XL
8H 15 July 2019 RTL Newspaper - VIDEO